सिरिया र उसका सहयोगी राष्ट्रलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको चेतावनी - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
सिरिया र उसका सहयोगी राष्ट्रलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको चेतावनी
प्रकाशित मिति: १९ भाद्र २०७५, मंगलवार
वासिंटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सिरियाको विद्रोही नियन्त्रित प्रान्त इद्लिवमा अन्धाधुन्ध आक्रमण नगर्न सिरियाली सरकारका साथै उसका सहयोगी रुस र इरानलाई चेतावनी दिएका छन् । ट्वीटरमा चेतावनी दिँदै उनले आक्रमणबाट हजारौं सर्वसाधारण मारिने भन्दै त्यो मानवीयताका हिसाबले गम्भीर भूल हुने उल्लेख गरेका छन् ।
सिरियामा विद्रोहीको नियन्त्रणमा बाँकी रहेको एउटामात्र प्रान्त इद्लिवमा सेनाले बृहत् आक्रमणको तयारी गरिरहेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सिरियाली सेना र उसको गठबन्धनले रासायनिक आक्रमण गरे त्यसको जवाफ दिने चेतावनी दिइसकेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले यस्तो कारवाहीबाट हजारौं सर्वसाधारण विरुद्ध विनाशकारी परिणाम निम्त्याउने जनाएको छ । इद्लिवमा करिब १० हजार नुसरा र अल कायदाका जिहादी लडाकु रहेको राष्ट्रसंघको अनुमान छ । सिरियामा सन् २०११ यता राष्ट्रपति बसर अल असदको शासनविरुद्ध सुरु भएको संघर्षका कारण ४ लाखभन्दा बढी मानिस मारिएका छन् भने मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्या पलायन भएका छन् ।
काठमाडौं । नेपालले पहिलो पटक अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट (भू–उपग्रह) 'नेपाली स्याट वन' अमेरिकाबाट प्रक्षेपण […]
भारतमा लोकसभा निर्वाचन: २० राज्यका ९१ सिटका लागि मतदान, को आउला सत्तामा ?
काठमाडौ । भारतमा लोकसभा निर्वाचनका लागि आजदेखि मतदान हुँदैछ । सात चरणमा सकिने निर्वाचनको परिणामका विषयमा […]
नोट्र डाम गिर्जाघर आगलागी : अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ओबामाद्वारा दुःख व्यक्त
काठमाडौं । पेरिस आगलागनीले ऐतिहासिक सम्पदा नष्ट भएको भन्दै अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले दुःख व्यक्त […]
लिवियामा आन्तरिक द्धन्द चर्कियो,सुरक्षाको प्रमुख जिम्मा नेपाली सेनालाई
काठमाडौं । अफ्रिकी राष्ट्र लिवियामा आन्तरिक द्धन्द चकिएपछि सुरक्षाको प्रमुख जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । […]
इतिहासमै पहिलो पटक ‘ब्ल्याक होल’को तस्बिर सार्वजनिक,के हो ‘ब्ल्याक होल’?
काठमाडौं । हामीले ‘ब्ल्याक होल’ बारे धेरै सुनेका छौँ तर बुधबार इतिहासमै पहिलो पटक ब्ल्याक होलको तस्बिर […]
विश्वकै धनी मानिसको २५ वर्षको सहयात्रा:सम्बन्धविच्छेद ३८ अर्ब नेपाली रुपैयाँमा टुङ्गियो
एजेन्सी । संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्ति जेफ बेजोस र उनकी पत्नी मक्केन्जी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो ३५ बिलियन […]
चिन्ता, तनाव र घुर्ने समस्या हुनेहरुका लागि अचुक उपाय